MAK 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAK 1)
Akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu ugbu a bụ akụkọ banyere Jisọs Kraịst, Ọkpara Chineke.
Amụma ahụ Aịzaya onye amụma buru emezuola. Nꞌihi na Chineke sitere nꞌọnụ ya gbaa ama sị na mgbe ọbịbịa Jisọs ruru, ọ ga-ezite otu onye ga-ekwusara mmadụ nile na oge ọbịbịa ya eruola.
Nwoke a, dị ka Aịzaya siri kwuo ga-esite nꞌọzara ebe ọ ga-ebi kwuo okwu. Isi okwu ya ga-abụkwa: “Dozienu ụzọ maka ọbịbịa Onyenwe anyi, meenụ ka okporo ụzọ ọ ga-agbaso guzozie.”
Nwoke ahụ Chineke zitere bụ Jọn omee baptizim. O bi nꞌọzara, sitekwa nꞌebe ahụ jegharịa ebe nile. Ọ na-akpọku ndị mmadụ ka ha site na mmehie ha chegharịa, ka e mee ha baptizim, ka Chineke gbaghara ha.
Ọtụtụ mmadụ sitere Judia na obodo nile dị Jerusalem gburugburu bịakwute ya. Ha jekwuuru ya nꞌosimiri Jọdan ebe ọ nọ na-ekwusa nkwusa ya. Mgbe ha kwupụtasịrị mmehie ha o mere ha baptizim.
Uwe Jọn yi nꞌahụ ya bụ nke e mere site nꞌajị inyinya a na-akpọ kamel. O kekwara belịtị dị warara nꞌukwu ya. Nri ọ na-eri bụ nanị igurube na mmanụ aṅụ a na-azaghị aza.
Mgbe ndị mmadụ na-abịakwute ya, Jọn kwusaara ha na-asị, “Ọ dị nwoke dị ukwuu ga-abịa nꞌoge na-adịghị anya. Ọ dị ukwuu karịa m. Ọ dị nnọọ ukwuu na enweghị m ike ịtọpụ eriri e jiri kechie akpụkpọ ụkwụ ya.
Ugbu a ana m eji mmiri efu na-eme unu baptizim, ma mgbe nwoke ahụ dị ukwuu bịara, ọ ga-eji Mmụọ Nsọ mee unu baptizim.”
Otu ụbọchị, Jisọs sitere Nazaret obodo dị nꞌime Galili bịa nꞌosimiri Jọdan. Ọ bịara ka Jọn mee ya baptizim. Jọn mekwara ya baptizim.
Mgbe Jisọs si nꞌime mmiri ahụ na-apụta, oge Jọn mechara ya baptizim, ọ hụrụ ka eluigwe meghere, hụkwa ka Mmụọ Nsọ si nꞌeluigwe rịdata dị ka nduru, bekwasị Jisọs nꞌisi.
Ọ dịghị anya mgbe ihe ndị a mesịrị, Mmụọ Nsọ kwaliri Jisọs ka ọ gaa nꞌime ọzara.
Ebe ahụ ka ọ ga-anọ iri ụbọchị anọ ka ekwensu nwaa ya ọnwụnwa. Nanị ya nọ nꞌebe ahụ, mmadụ ọ bụla anọkwaghị ya, kariakwa ụmụ anụ ọhịa. Ma ndị mmụọ ozi bịakwara nyere ya aka.
Emesịa, mgbe e jidere Jọn tụnye ya nꞌụlọ mkpọrọ, Jisọs gara Galili. Ebe ahụ ka ọ nọ na-ekwusa ozi ọma Chineke.
Mgbe ọ na-aga ije nꞌakụkụ ọnụ mmiri osimiri Galili ọ hụrụ Saịmọn na Anduru nwanne ya. Ha bụ ndị ọkụ azụ. Jisọs hụrụ ha mgbe ha na-awụnye ụgbụ ha ji egbu azụ nꞌime mmiri.
Jisọs kpọrọ ha sị ha, “Bịanụ soro m. Aga m eme ka unu ghọọ ndị ọkụ na-akụta mmadụ.”
Ngwangwa ha hapụrụ ụgbụ azụ ha soro Jisọs.
Mgbe Jisọs hapụrụ ebe ahụ gatụ nꞌihu nke nta, ọ hụrụ Jemes na Jọn nwanne ya. Ha abụọ bụ ụmụ Zebedi. Ha bụkwa ndị ọkụ azụ. Nꞌoge Jisọs hụrụ ha ha nọ na-adụchi ụgbụ ha dọkara adọka.
Otu ihe ahụ Jisọs gwara Saịmọn na Anduru ka ọ gwakwara Jemes na Jọn. Na-atụfughị oge Jemes na Jọn hapụrụ nna ha nꞌime ụgbọ mmiri ha ji egbu azụ soro Jisọs. Nna Jemes na Jọn nwere ndị o goro ọrụ so ya na-arụ ọrụ nꞌoge a.
Mgbe oge nta gasịrị, Jisọs na ndị so ya bịaruru Kapanọm. Nꞌụbọchị izuike ndị Juu, nke bụ ụbọchị Satọde, bụrụkwa ụbọchị ịga nꞌụlọ ekpere, Jisọs na ndị na-eso ya jere nꞌụlọ ekpere dị nꞌebe ahụ. Nꞌebe ahụ, Jisọs ziri ndị bịara okwu Chineke.
O juru ndị nọ nꞌụlọ ekpere ahụ anya otu Jisọs si kwuo okwu Chineke. Nꞌihi na o zighị ha dị ka ndị ozizi ndị Juu si ezi. Kama o ziri ha dị ka onye maara ihe nile.
Ma nꞌụlọ ekpere ahụ e nwere otu nwoke nọ nꞌime ya nke mmụọ ọjọọ na-esogbu. Mgbe nwoke a nụrụ ihe Jisọs na-ezi, o tiri mkpu akwa sị,
“Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ gị Jisọs onye Nazaret? Ị̀ bịara nꞌebe a ka ị laa anyị nꞌiyi? Amaara m gị, ị bụ Ọkpara Chineke dị ndụ!”
Jisọs baara mmụọ ọjọọ ahụ mba sị ya, “Mechie ọnụ si nꞌime nwoke a pụta!”
Nꞌotu oge ahụ mmụọ ọjọọ ahụ mere ka akwụkwụ dọọ nwoke ahụ. Emesịa ọ kwara akwa nꞌoke olu hapụ nwoke ahụ.
O juru ndị nọ nꞌụlọ ekpere ahụ anya nke ukwuu. Nꞌihi ya ha bidoro na-ajụrịta onwe ha ajụjụ na-asị, “Anyị ga-esi aṅaa kọwaa ihe anya anyị hụrụ taa? Nꞌezie, nke a bụ nnọọ ozizi ọhụrụ! Lee, okwu ọnụ efu ka o ji nye iwu ka mmụọ ọjọọ site nꞌahụ mmadụ pụọ, ha pụkwara!”
Ọ dịghị anya akụkọ ọrụ a Jisọs rụrụ gbasara ruo ebe nile. Ndị mmadụ bi nꞌakụkụ Galili nile nụrụ ihe banyere ya.
Mgbe ha si nꞌụlọ ekpere ahụ pụta, Jisọs gara nꞌụlọ Saịmọn na Anduru. Jemes na Jọn sokwa ya gaa.
Mgbe ha jeruru nꞌụlọ ahụ, ha hụrụ nne nwụnye Saịmọn ka o dina nꞌihe ndina. Ahụ ọkụ jikwa ya. Ha gwara Jisọs banyere nke a.
Jisọs gara nso ebe nwanyị a dina, jide ya nꞌaka, selie ya elu inyere ya aka ịnọdụ ala. Otu mgbe ahụ, ahụ ọkụ ahụ kwụsịrị. Nwanyị ahụ bilikwara gaa siere ha nri anyasị.
Nꞌoge anyasị, mgbe anwụ dara, ndị mmadụ butere ndị ha ahụ na-esighị ike, dote ha nꞌihu ụlọ ebe ahụ Jisọs nọ. Ha butekwara ndị mmụọ ọjọọ na-esogbu.
Nꞌanyasị ahụ kwa, a pụrụ ịsị na ndị nile bi na Kapanọm zukọrọ nꞌihu ụlọ ahụ ịhụ Jisọs na ịnụ okwu si ya nꞌọnụ na-apụta.
Jisọs pụtara nꞌezi gwọọ ndị nile ọrịa dị iche iche na-arịa. Ọ chụpụkwara mmụọ ọjọọ site nꞌahụ ndị ọ na-enye nsogbu. Ebe ọ bụ na mmụọ ọjọọ ndị a maara onye Jisọs bụ, o kweghị ka ha kwuo okwu ọ bụla mgbe ọ na-achụpụ ha.
Nꞌisi ụtụtụ ụbọchị nke ọzọ ya, mgbe mmadụ nile nọ na-arahụ ụra, mgbe ìhè ọ bụla na-adịghị, Jisọs sitere nꞌụra teta. O sitere nꞌụlọ ahụ ọ nọ pụta, pụọ, gaa ebe ọ ga-anọrọ onwe ya, nanị ya. Nꞌebe ahụ kwa ka ọ nọ kpee ekpere.
Mgbe chi bọziri Saịmọn na ndị ọzọ nọ nꞌụlọ ahụ chọgharịrị ya, ma ha ahụghị ya. Ha pụrụ jegharịa ịchọ ya.
Mgbe oge nta gasịrị, ha hụrụ ya, gwa ya okwu sị, “Lee na ndị mmadụ jupụtara nꞌihu ụlọ ahụ na-eche gị!”
Ma Jisọs gwara ha sị, “Ka anyị gaanụ ebe ọzọ, ka anyị gaanụ nꞌobodo ndị ọzọ dị anyị gburugburu, ka m kwusaakwara ha ozi ọma. Ọ bụ nꞌihi nke a ka m ji bịa.”
Ya mere, ha pụrụ jegharịa nꞌebe dị iche iche na Galili. Ebe ọ bụla ha jeruru, Jisọs kwusara ozi ọma nꞌụlọ ekpere ndị Juu. Ọ chụpụkwara mmụọ ọjọọ.
Otu ụbọchị, otu onye ekpenta bịakwutere Jisọs rịọọ ya sị, “Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha.”
Jisọs nwere ọmiko nꞌahụ ya. O setipụrụ aka ya metụ onye ekpenta ahụ aka sị ya, “Achọrọ m ka ị dị ọcha, dịkwa ọcha.”
Nꞌotu oge ahụ, ọrịa ekpenta ahụ lara. Ahụ dịkwara nwoke ahụ mma!
Mgbe ahụ kwa, Jisọs dọrọ nwoke ahụ ọ gwọrọ aka na ntị sị ya,
“Lee, agwakwala onye ọ bụla banyere ọgwụgwọ m gwọrọ gị. Kama laa ugbu a, gaa gosi onye nchụaja onwe gị. Imekwa ka ndị ọzọ mata na a gwọọla gị gaa nye onyinye dị ka Mosisi nyere nꞌiwu na ndị a gwọrọ ọrịa ekpenta ga-enye.”
Ma nwoke ahụ lara kọsaa akụkọ ọgwụgwọ ya ebe nile. Nꞌihi nke a ọtụtụ mmadụ gbara Jisọs gburugburu. Nke a mere ka o siere Jisọs ike ịbanye nꞌobodo ọ bụla mgbe ìhè dị. Ya mere, ọ nọdụrụ nꞌebe ndị mmadụ na-ebighị. Ma ọtụtụ igwe mmadụ sitekwara ebe nile bịakwute ya nꞌebe ahụ.